आर्सनल र चेल्सीको शानदार सुरुवात, को-कोले गरे गोल ? - Everest Dainik - News from Nepal
आर्सनल र चेल्सीको शानदार सुरुवात, को-कोले गरे गोल ?
एजेन्सी, असोज ५ । आर्सनलले जारी युरोपा लिग फुटबलमा विजयी सुरुवात गरेको छ । लिगको समूह चरण अन्तर्गतको आफ्नो पहिलो खेलमा उसले गएराती वार्स्क्ला पोल्ताभालाई ४-२ ले हराएको हो ।
आर्सनललाई जित दिलाउन पिएर एमरिकले २ तथा ड्यानी वेलबेक र मेसुट ओजिलले एक एक गोल गरे । पोल्ताभाका लागि भ्लादिमिर चेस्नाकोभ र व्याचेस्लाभ शार्परले एक एक गोल गरे ।
युरोपा लिग अन्तर्गत बिहीबार राति नै भएको अर्को खेलमा समूह एल मा रहेको चेल्सीले जित निकालेको छ । अवे मैदानमा भएको खेलमा चेल्सीले पिएओके सालोनिकालाई १-० ले हराएको हो । चेल्सीको जितमा सातौँ मिनेटमा विलियनले गरेको गोल नै निर्णायक बन्यो ।
याे पनि पढ्नुस युरोपा लिग फुटबलः आर्सनल अन्तिम ३२ बाटै बाहिरियो
ट्याग्स: Arsanl, chelsi, युरोपा लिग फुटबल